zawzawmyint's Likes - Myanmar Network
Back to zawzawmyint's Page
စကားပြောရာမှာ အသံကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြု… [Zawgyi] အလုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးပါတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုကတော့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ အရေးကြီးကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး လုပ်… Discussion စကားပြောရာမှာ အသံကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြု… 63 Likes
Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… [Zawgyi] What are the benefits of positive thinking? Benefits of positive thinking အကြောင်း မဆွေးနွေးမီ "What is positive thinking?" ကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ "Positive thinking is to loo… Discussion Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… 54 Likes အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၁၀) ၂၉။ although and though သော်လည်းပဲ။ လင့်ကစား။ စေကာမူ (al)though + clause, + clause clause, + (al)though + clause clause + though ၁။ ၄င်းစကားလုံးနှစ်ခုလုံးအား သမ္ဗန္ဓ အနေနှင့်သုံးနိုင်သည်။ အဓိပ္ပါယ်တူဖြစ… Discussion အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၁၀) 19 Likes ထိရောက်သော CV (The Successful CV) [ Zawgyi ] ထိရောက်သော CV (The Successful CV) အောင်မြင်သော CV တစ်စောင်သည် သေချာစွာ စဉ်းစားခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်းတို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါ တယ်။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဟာ အလုပ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အတွေ့အကြုံ… Discussion ထိရောက်သော CV (The Successful CV) 71 Likes
ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားစုများ ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသောအင်္ဂလိပ်စကားစုများ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ရင် အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးဝယ်လို့ရတတ်ပါတယ်။ စကားမတတ်လည်း ၀ယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး ၀ယ်လို့ရပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြထာ… Discussion ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားစုများ 97 Likes သော်လည်းဘဲ ၀ါကျများ (improving your writing… Although and Though sentence တစ်ကြောင်းရဲ့ main clause အဓိပ္ပါယ်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အထူးပြုထားတဲ့ adverbial clause တစ်ခုကို Although/Though နဲ့ ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Though ကို informal context မှာ အသ… Discussion သော်လည်းဘဲ ၀ါကျများ (improving your writing… 13 Likes ကိုယ်တိုင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ [Zawgyi] ကျောင်းသားအများစုဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း၊ သဒ္ဒါအမှားတွေကို ဆရာတွေကပြင်ပေးလိမ့် မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်းသဘာဝကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတွေကပြင်ပေးကြတာပေါ့… Discussion ကိုယ်တိုင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများ 15 Likes zawzawmyint Member zawzawmyint 1 Like Comma ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်… “In Praise of the Humble Comma” ဆိုတဲ့ တိုင်း(မ) မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ဆောင်းပါးရှင် Pico Iyer က ကော်မာ (,)ကို “ကျွန်ုပ်တို့ကို အရှိန်လျော့ခိုင်းနေသော လင်းနေတဲ့ အ၀ါရောင်မီး”နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားပ… Discussion Comma ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင်… 37 Likes အသစ်တင်ထားသော သုတ/ရသ ဆောင်းပါး၊ကဗျာ နှင့် ကာ… Yamin Aye ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း" မြို့များစွာထဲမှ ရန်ကုန်မြို့သည် ဘာကြောင့် စည်ကားဆုံးမြို့ဖြစ်နေသနည်း အဖြေရှာကြည့်တော့ လူနေမှုထူထပ်နေခြင်းနဲ့ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးရှိခြင်းဆိုတဲ့အေ… Discussion အသစ်တင်ထားသော သုတ/ရသ ဆောင်းပါး၊ကဗျာ နှင့် ကာ…3Likes သုံးလုံးတွဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအသုံးအနှုန်း သုံးလုံးတွဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအသုံးအနှုန်း (English three-word phrases) အင်္ဂလိပ်စာမှာ သုံးလုံး တွဲစကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ၄င်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပြီး စကားပြောရာတွင် အသ… Discussion သုံးလုံးတွဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအသုံးအနှုန်း 31 Likes ကိုယ်ဟန်အမူအရာဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြမယ် စကားပြောတဲ့အခါ စကားလုံးတွေကိုတင် အသုံးပြုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာအမူအရာ၊ လက်ဟန်၊ ကိုယ်ဟန် အမူအရာတွေကိုပါ အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ ဘာသာစကား ဒါမှမဟုတ် ဘာသာစကားမဟုတ်သော ဆက… Discussion ကိုယ်ဟန်အမူအရာဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြမယ် 75 Likes